Ninkii sheegay inuu laayey xildhibaano oo saaka lagu toogtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay labo nin oo ka tirsan Alshabaab, kuwaasoo lagu eedeeyey iney Muqdisho ku dileen dad badan oo xildhibaano ka mid ahaayeen.
Ragga saaka lagu toogtay fagaaraha Dugsiga Sare ee Tababarka booliska ee Soomaaliyeed waxaa ku jiray nin lagu magacaabo Shuceyb Ibraahim Mahdi, kaasoo muqaal iyo cod laga duubay oo laga sii daayey warbaahinta dowladda Soomaaliya ku sheegay inuu laayey tiro xildhibaano ah.
Sidoo kale, waxaa saaka fagaraahaas lagu toogtay Faarax Cali Cabdi oo isna la sheegay inuu ka tirsanaa Alshabaab, dilal badanna ku lug lahaa.
6-dii April ayay ahayd markii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay Shuceyb Ibraahim Mahdi oo 37 jir ah iyo Faarax Cali Cabdi oo 30 sano jir ah ku riday xukun dil ah, markii xeer ilaalinta Qaranka ay ku soo eedeysay dilal dhowr ah oo ay ka fuliyeen Muqdisho iyo ka mid ahaanshiyaha Alshabaab.
1- Ex-Xildhibaan Saado Cali Warsame oo lagu dilay Muqdisho
2- Ex-Xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayd, oo lagu dilay Muqdisho
3- Ex-Xildhibaan Aadan Maxamed Cali “ Sheekh Aadan Maddeer” oo lagu dilay Muqdisho,
4- Axmed Odawaa Baale oo ka tirsanaa hay’adda nabad sugidda Qaranka, oo lagu dilay Muqdisho.
5- Maxamed Axmed Maxamed “Qaanuuni” oo ka tirsanaa hay’adda nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, oo lagu dilay Muqdisho.